HIM | Health in Myanmar » 2009 » October
Author: HimBur | Category: Myanmar1 comment | Tags: HIV
[ဟင်: မ်] ဘလော့မှာ ဖော်ပြနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ဆိုင်တဲ့ အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီ သတင်း ကောင်းနိုးရာရာ တွေကို စီစဉ်သူတွေက အီးမေးလ်ကနေ အခမဲ့ ဖြန့်ဝေ ၀န်ဆောင်ပေး နေပါ တယ်။ အီးမေးလ်ကနေ တဆင့် ဆောင်းပါးနဲ့ သတင်းတွေကို လက်ခံချင်သူ၊ စာမူ ပေးပို့လိုသူတွေ အနေနဲ့ ( HIV.Information.for.Myanmar [at] gmail [dot] com ) လိပ်စာကို အီးမေးလ်ရေးသား ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။ စာရင်းဝင်ပြီးတာနဲ့ အခု အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာ တင်မယ့်စာမူတွေကို နေ့စဉ် လက်ခံရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး၊ ဝေဖန် အကြံပြု ချက်တွေကို မိမိဘယ်သူဆိုတာ ဖော်ပြစရာမလိုဘဲ လွတ်လပ်စွာ ရေးသားပေးပို့ နိုင်ကြပါတယ်။
အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီနှင့် အခွင့်အရေး ယူတတ်သော ပိုးမွှားများ ကူးစက်မှု (၃)
HIV/AIDS လူနာများတွင် အခွင့်အရေးယူတတ်သော ပိုးမွှားများ ကူးစက်ခံရသဖြင့် ၀မ်းဗိုက်နာခြင်း၊ အောင့်ခြင်း ခံစားရတတ်သည်။ ၀မ်းဗိုက်နာခြင်း၊ အောင့်ခြင်းကို အဓိက ဖြစ်စေသည်မှာ –
Myanmar Times article on Ratana Metta
Most headlines are not written by the authors of the article but by editors. The [him] moderator sees no evidence here that Ratana Metta has struggled and has not heard that they will have to struggle to fund ART treatment. Good to see positive prevention highlighted.
Sign on letter about ART as prevention
Here isasign on letter. There is NO scientific evidence that ART works as prevention. At least some civil society groups are aware of the human rights abuses which may occur if it is piloted and rolled out without evidence.
ရောဂါသုံးမျိုးရန်ပုံငွေ အစီအစဉ်များ၏ ရလဒ်များကို သုံးသပ်သည့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်
ရောဂါသုံးမျိုးရန်ပုံငွေ (3D fund) ပြီးခဲ့သည့်နှစ်တွင် ဆောင်ရွက်ခဲ့သော အစီအစဉ်များ၏ ရလဒ်များကို သုံးသပ်သည့် နှစ်ပတ်လည် ပြန်လည်သုံးသပ်ရေး အစည်းအဝေးကို ရန်ကုန်မြို့တွင် အောက်တိုဘာ ၁၄ရက်နေ့က ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
Abstract on raising awareness
Here is another ICAAP abstract for which the [him] moderator was unable to obtainapaper. Readers already know his views on raising awareness.
Shooting galleries and CARE Myanmar
The [him] moderator has been unable to obtainacopy of the paper on which this ICAAP abstract is based.
Asian Network of People who Use Drugs ANPUD formed
Here is good news on the development of an organisation of drug users. Is thereareport from Tom that HIV Information for Myanmar [him] can post?
HIV ကူးစက်ခံရရန် အန္တရာယ်ကြီးသည့် လူများထဲတွင် လိင်င်္ဂါ ပြောင်းထားသူများပါဝင်
HIV ပိုးကူးစက်ခံရရန် အန္တရယ်ကြီးမားသည့် လူအုပ်စုဝင်များထဲတွင် လိင်င်္ဂါပြောင်းလဲ ထားသူများ ပါဝင်လာကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ကြက်ခြေနီအသင်းမှ ပြုလုပ်သော အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီ ဆိုင်ရာ သက်တူရွယ်တူအဆင့်တူ ပညာပေးအစီအစဉ် အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲမှ သိရသည်။
ကာလသားရောဂါ ( Syphilis )
Author: HimBur | Category: Myanmar21 comments
ကာလသားရောဂါဆိုတာ လိင်ဆက်ဆံတာကနေ ကူးစက်တက်တဲ့ ရောဂါတွေထဲက ရောဂါတစ်ခုပါ။Sexually Active ဖြစ်တဲ့အရွယ်၊ စမ်းသပ်ချင်ကြတဲ့ ကာလသားလေးတွေမှာ ဖြစ်တက်တဲ့ ရောဂါတစ်ခုမို့လို့ ကာလသားရောဂါလို့များ နာမည်ပေးခဲ့လားမသိ ။ ဆေးပညာ ခေါ်အဝေါ်ကတော့ (Syphilis ) လို့ခေါ်ပါတယ် ။
Microfinance job with PACT
It doesn't say that people with HIV are encouraged to apply …
Three Diseases Fund annual review meeting press release
Here isapress release from the Three Diseases Fund. The [him] moderator hopes to post the Round3grant announcement and all the HIV presentations soon. And in less thanamonth the mid term evaluation report of the Three Diseases Fund will be released. It will be posted here as soon as it is.